शुद्ध श्रमजीवीहरूलाई शुद्ध कलमजीवीको शुभकामना !
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिशुद्ध श्रमजीवीहरूलाई शुद्ध कलमजीवीको शुभकामना !
कन्टिर–बाबू आजको दिन राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सबैखाले मजदुरहरूसँग खुसीयाली साट्न चाहन्छन् । शुभकामना दिन्छन् । सँगसँगै उनी आज बिहानैदेखि बडो चिन्तामग्न पनि छन् ।
नेपालमा मजदुर–किसानका नाममा राजनीति गरेर कहिले नथाक्नेहरू अहिले सत्तामा छन् । तर जो वास्तविक मजदुर–किसान, श्रमजीवी हुन्, तिनले सत्ताबाट के पाए ? अप्ठेरो र महामारीमा राहत के पाए ? रोजगारीको अवसर र सुरक्षा कति पाए ?
कन्टिर–बाबूको प्रश्न छ– भुइँ तहको मजदुर–किसान अहिलेको सरकारको कामसँग सन्तुष्ट, खुसी भएको कुनै अनुकरणीय उदाहरण छ कसैसँग ? साहु–महाजन र सरकारी निकायबाट नै मजदुर–किसानको पसिनाको मूल्य शौषण र बिचल्ली हुने देशमा किन मनाउने श्रमिक दिवस ? खाली मजदुर–किसानको नाममा सीमित सुकिला–मुकिलाको सत्ता टिकाउन ?
त्यसो त मजदुर–किसानको नाममा राजनीति गर्ने तर ठाउँ पाइसकेपछि दायित्व भुल्नेहरूलाई मजदुर–किसानलाई सम्बोधन गर्दै भाषण गर्न थोरै भए पनि लाज लाग्नुपर्ने हो । तर लामो समयदेखि सत्ताधारीहरूको व्यवहार नजिकबाट नियालिरहेका कन्टिर–बाबू अचेल एउटा तितो निष्कर्षमा पुगेका छन्– सत्ताधारी भइसकेपछि लाज, घिन, शरम केहीतिर ध्यान नजाँदो रहेछ ।
टार, कोट र दरवारमा बसेर स्यान्डविच घिच्नेहरूलाई मकै, भटमास, जनेर, कनिकाको फक्का, नुन–खोर्सानी, रोटीको मूल्य के थाहा ?
कन्टिर–बाबू फेरि सम्झिन्छन्– अपना काम बनता, भाँड में जाए मजदुर–किसान जनता । कसैगरी आफ्नो सत्ता टिके भो । टार, कोट र दरवारमा बसेर स्यान्डविच घिच्नेहरूलाई मकै, भटमास, जनेर, कनिकाको फक्का, नुन–खोर्सानी, रोटीको मूल्य के थाहा ? अझै गुड्डी हाँक्छन् मजदुर–किसानको हकहितको । अरे ओ बेशरम, केही त शरम गर !
यही मजदुर–किसानको नाम भजाएर तिमीहरू शासनमा आएको होइन ? हिम्मत छ भने सार्वजनिक गर, पछिल्लो तीन वर्षमा कति जना श्रमिक, मजदुरको कल्याण भयो ? कति जना मजदुर–किसान गरिबीको रेखामाथि उक्लिए ? त्यो त तथ्याङ्क आफैँ बोलिहाल्छ नि !
पहिले–पहिले कम से कम मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन त थियो । हेदौहेर्दै मजदुर–किसान, सर्वहाराको भनिएको सरकारले त्यो परम्परा पनि पोलेर खाइदियो ।
पछिल्लो वर्ष थप ६ प्रतिशत नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनि झरेका छन् भन्ने तथ्याङ्क हालै सार्वजनिक भएको छ । यसमा के छ मजदुर–किसानको सधैँ नाम भजाउनेहरूको सरकारी प्रतिक्रिया ? कन्टिर–बाबू जान्न उत्सुक छन् ।
कन्टिर–बाबूको अर्काे कुरा पनि छ । पछिल्लो तीन वर्षमा सत्तानजिक रहेकाहरूको विगत र वर्तमानको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर । छ हिम्मत ? पहिले–पहिले कम से कम मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन त थियो । हेदौहेर्दै मजदुर–किसान, सर्वहाराको भनिएको सरकारले त्यो परम्परा पनि पोलेर खाइदियो ।
तर जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ भन्ने कन्टिर–बाबूलाई लाग्छ । कम से कम ‘हाम्रो सत्ता आउँछ अनि हाम्रो कल्याण हुन्छ,’ भन्ने भ्रमबाट यो तीन वर्षमा असङ्ख्य मजदुर–किसानहरू सदाका लागि बाहिरिएका छन् ।
मजदुर–किसानको नाममा राजनीति गर्नेहरूको सक्कली व्यवहार देखिसकेपछि कति वास्तविक मजदुर–किसान सपना र भ्रमबाट बाहिरिए ? त्यसको यकिन तथ्याङ्क त कन्टिर–बाबूसँग छैन । तर उनलाई थाहा छ– आगामी मतपत्रमा त्यसको राम्रै प्रतिबिम्बन देखिनेछ ।
कन्टिर–बाबू आफैँ पनि एक शुद्ध श्रमजीवी (कलमजीवी) हुन् । आजसम्म दैनिक लेखेरै आफूलाई टिकाइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा सबै शुद्ध मजदुर–किसान, श्रमिकहरूको जीवन स्तरोन्नतिको कामना गर्छन् ।
शुभकामना श्रमिक दिवस सर्वहारा